Tag: akpaaka ahịa | Martech Zone
Tag: akpaaka ahịa
Gịnị bụ MarTech? Teknụzụ Azụmaahịa: Gara aga, Ugbu a, na Ọdịnihu
Saturday, March 27, 2021 Sunday, Eprel 11, 2021 Douglas Karr
Nwere ike ịtụle m dee otu edemede na MarTech mgbe ekwusara ihe karịrị 6,000 ederede na teknụzụ azụmaahịa ihe karịrị afọ 16 (karịa afọ blog a… I was on blogger previous). Ekwenyere m na ọ bara uru ibipụta ma nyere ndị ọkachamara azụmaahịa aka ịghọta ihe MarTech bụ, bụ, na ọdịnihu nke ihe ọ ga-abụ. Ihe mbu, n'ezie, bu na MarTech bu uzo nke ahia na teknụzụ. Agbaghara m nnukwu
Otu akụkụ na-enye obi ụtọ nke ụlọ ọrụ m bụ ihe na-aga n'ihu na mbibi dị egwu maka ikpo okwu ịzụ ahịa ahịa ọkaibe. Ebe ulo ahia jiri otutu puku kwuru puku dollar (ma ka na-eme) maka nnukwu nyiwe… ugbu a, ugwo akwụdala nke ọma ebe atụmatụ ahụ na-aga n'ihu na-akawanye mma. N'oge na-adịbeghị anya, anyị na ụlọ ọrụ na-emezu ejiji na-arụ ọrụ nke dị njikere ịbịanye nkwekọrịta maka ikpo okwu nke ga-efu ha ihe karịrị ọkara nde dollar
Mgbanwe Dijitalụ: Mgbe CMOs na CIOs jikọrọ aka, Onye ọ bụla na-enweta Mmeri
Wenezdee, Jenụwarị 20, 2021 Wenezdee, Jenụwarị 20, 2021 Bonnie Crater
Mgbanwe dijitalụ mere ngwa ngwa na 2020 n'ihi na ọ ghaghị. Ọrịa ahụ mere ka usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mkpa ma weghachite nyocha ngwaahịa na ịzụrụ maka azụmaahịa na ndị ahịa. A manyere ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ọnụnọ dijitalụ siri ike ịmalite otu ngwa ngwa, ndị isi azụmaahịa kwagara ka ha nwee ike ịnweta iyi nke mmekọrịta mmekọrịta data e mepụtara. Nke a bụ eziokwu na oghere B2B na B2C: Ọrịa ahụ nwere ike ịnwe ngwa ngwa mgbanwe mgbanwe dijital na-aga n'ihu
Mfe: Shinye ọnụahịa mbufe, Ndepụta, ịdebanye aha, mmelite ọnọdụ, na ọnụ ala maka azụmahịa
Tuesday, January 5, 2021 Tọzdee, Febụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Enwere otutu ihe dị mgbagwoju anya na ecommerce - site na nhazi ịkwụ ụgwọ, lọjistik, mmezu, site na mbufe na nloghachi - na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elelị ka ha na-azụ ahịa ha n'ịntanetị. Mbupu bụ, ikekwe, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịzụrụ n'ịntanetị ọ bụla - gụnyere ọnụahịa, ụbọchị nnyefe e mere atụmatụ, yana nsochi. Costsgwọ ndị ọzọ nke mbupu, ụtụ isi, na ụgwọ bụ maka ọkara nke ụgbọ ahịa ịzụ ahịa niile agbahapụ. Nbudata ngwa ngwa bu ihe ruru 18% nke ahia zuru oke
Omnisend: Ihe eji eme ihe di mfe iji nweta Ecommerce Email & SMS Automation Automation
Tọzdee, Disemba 29, 2020 Tuesday, January 12, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime ọmarịcha ọganihu na azụmaahịa ahịa afọ a, n'uche nke m, ọ bụ ọganiihu nke ezigbo ego iji megharịa ahịa ecommerce gị. A ghaghị ijikọ nyiwe akpaaka azụmaahịa dị iche iche wee mezie mkpọsa ọ bụla na - agafe oge - mmejuputa ahụ nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa tupu ịmalite ịmalite ịnweta ego. Ugbu a, nyiwe ọhụrụ ndị a anaghị arụpụta njikọta nke ọma, ha nwere mkpọsa ndị dị njikere ịmalite ozugbo